Somalis For Jesus: Qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay Boosaaso
Qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay Boosaaso
File photo, SFJ
Khamiis,, December 09, 2010(HOL): Caawa Salaaddii Maqrib kaddib ayaa waxaa gudaha magaalada Boosaaso ka dhacay Qarax ka dhashay miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago, kaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa oo aad u xoogganaa ayaa waxaa lala eegtay gaari uu watay Taliyaha Ciidamada Magaalada Boosaaso Xuseen Cali Dheere iyo Darawalkiisii oo ay labaduba dhinteen, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen askar kale oo Taliyaha ilaalo u ahayd.
Gudaha magaalada Boosaaso ayaa qaraxaas kaddib laga maqlayay rasaas ay ridayaan Ciidamada Ammaanka Magaalada, kuwaasi oo sidoo kale baaritaanno ku sameeyay meelo ay tuhmeen in falka qaraxa laga soo abaabulay.
Shalay ayay ahayd markii magaaalda Boosaaso lagu dilay sarkaal ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda Puntland, walow uu maamulku sheegay in la helay labo nin oo dilka Sarkaal ka dambeeyay isla markaana la toogtay.
Bishii hore ayay ahayd markii sidan oo kale gudaha Boosaaso loogu dilay saraakiil ka tirsan Maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa amni darrada ka jirta Magaalada Boosaaso wuxuu ku eedeeyay Maxamed Siciid Attam, wuxuuna maamulka intaas ku daray in dagaallo uu la galay Xoogaga u daacad ahaa Maxamed Siciid Attam uu maamulka ku awood roonaaday.
Dadka ku dhaqan Magaalada Boosaaso ayaa waxay si weyn uga welwelsan yihiin amni darrada la soo deristay oo ah mid ku cusub. Magaalada Boosaaso oo ah Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaydhanka kale tahay Magaalo-ganacsiyeedka deegaannada Puntland oo dhan.
Posted by Somalis For Jesus .SFJ at 10:11 PM